About Us - Goodao Teknolojia Co., Ltd.
Tianjin Zhong Xin Teknolojia CO., LTD Faritany Tianjin, izay tanàna lanja mavesatra iray any amin'ny faritra avaratr'i Shina amin'ny mety fitaterana sy ny fampandrosoana haingana. Ny orinasa dia miorina any Tianjin Free Trade Area, niantehitra tamin'ny Tianjin Xingang - avaratr'i Shina seranana lehibe indrindra, izay eo akaikin'ny Tianjin seranan-tsambo sy seranam-piaramanidina Tianjin, amin'ny toerana ara-jeografika mahasoa.
Tianjin Zhong Xin dia fitambaran'ny famokarana sy ny varotra, ny indostria sy ny varotra fampidirana raharaham-barotra. Ny orinasa no misy ao amin'ny Datong, Shanxi Province, izay natokana ho an'ny fikarohana, ny fampandrosoana sy ny famokarana ny karbaona additive. Ny tena vokatra no manjarano Petroleum Coke, Calcined Petroleum Coke, manjarano Electrode sy manjarano Manary sy ny sisa. Amin'izao fotoana izao, ny Output ny manjarano Petroleum Coke nahatratra 4.000 taonina isam-bolana, ary ny Output ny Calcined Petroleum Coke efa hatramin'ny 5000 taonina isam-bolana. Ny vokatra dia be nampiasaina tamin'ny mpampatsiro hanina, orinasa simika, vy-kevitra, nanarato orinasa sy ny maro ny saha.
Ny orinasa manatanteraka modely fitantanana ny fotoana rehetra. Entana rehetra tsy maintsy mandalo hentitra fandinihana sy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena kalitao. Nandritra ny fotoana ela, dia mifikitra ny fitsipiky ny "Quality Voalohany, Customer Focus",. Taorian'ny taona maro ny fampandrosoana, ny habetsahan'ny ny raharaham-barotra dia nitarina tsikelikely. Ny vokatra dia tsy vitan'ny hoe nanome ny mpanjifa an-trano, fa koa nivarotra tany ivelany. Ny fanompoana sy ny toetra tsara efa nanaiky ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany. Ny mpanjifa vahiny zaraina any amin'ireo Japana, Korea, Etazonia, Alemaina, Taiwan, India, ary ny hafa firenena sy ny tanàna ao amin'ny faritra Euro-Amerikana.
Ny orinasa dia manaraka foana ny fampandrosoana hevitry ny "Building voalohany-kilasy orinasa sy ny famokarana avo-tsara ny vokatra", ka mikiry ny fitsipiky ny fitovian-jo, fifanampiana soa sy tso-po ny fiaraha-miasa, manome ny tsara indrindra vokatra, indrindra preferential vidiny, ary ny asa fanompoana tonga lafatra indrindra. Tsy Sincerely manantena hiara-miasa amin'ny Global mpanjifa, ary mamorona hoavy tsaratsara kokoa!